လမ်းပေါ်က ဟိုရိုက် ဒီရိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » လမ်းပေါ်က ဟိုရိုက် ဒီရိုက်	19
လမ်းပေါ်က ဟိုရိုက် ဒီရိုက်
Posted by ကျော်လွင်ဖြိုး on Jun 6, 2015 in Photography | 19 comments
တွေ့ရာမြင်ရာ ပုံရိပ် မှတ်တမ်းများ
၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ တုန်းက ရွာပြန်တုန်းလေး ရိုက်လာတာလေးတွေ။
ဒါတွေက ရှမ်းပြည် အောင်ဘန်း က ဆည် တစ်ခု မှာ (ဆည်နာမည် နဲ့ အဲ့ရွာနာမည် မေ့သွားပြီး) )
၁၊ ဘဝ အားမာန် (၁)
၂၊ ဟျောင့် ဘာကြည့်တာလဲကွ
၃၊ ရေချိုးဆိပ် ဆင်းချိန်
၅၊ အလုပ်တစ်ဖက် ကလေးတစ်ဖက်
၆၊ အပြစ်ကင်းသော အပြုံးများ
နံပတ် ၆ ပုံက အမျိုး အဘွား အိမ်နားက ကလေးတွေ
“လာကြ လာကြ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပေးမယ်” လဲ ဆိုရော တန်းစီ ပြီး ပြုံးနေလိုက်ကြတာ
နံပတ် ၇ ပုံကတော့ အောင်ပန်း မြို့ဘက် ပြန်ရောက်သွားပြီ
ဒီ ပုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ပြောစရာ ရှိ၊
ပထမတော့ အဲဒီ ကလေးလေးကို ကြည့်ပြီး ကလေး လုပ်သား ဆိုပြီး ထင်လိုက်မိတယ်။
နောက်မှ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရွာထဲမှာ တွေ့ရတာတွေက အဲဒီ က လူတွေက ကိုယ့် အိမ် ကိုယ် ဆောက်ကြသဗျ။း)
အဲဒီ အုတ်လေးတွေနဲ့ အိမ်ခပ် သေးသေး တွေပေါ့ ၁ထပ် အိမ် ၂ထပ် အိမ် တွေ။
ကလေး သေးသေးလေးတွေက အစ သူတို့ မိဘ တွေကို ဝိုင်းကူနေကြတာ တွေ့တယ်။
စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ့် မိသားစု နေဖို့ အိမ် ကို
ကိုယ်တိုင် ကူညီ ပြီး ဆောက်ပေးရတယ် ဆိုတဲ့ ပီတိ ကလဲ တော်တော်လေးတော့ ကြည်နူး စရာ ကောင်းမှာပဲ။
၇၊ ဘဝအားမာန် (၂)
နံပတ် ၈ ပုံလေးကို သဘောကျလို့ စလုံးတွေကို မြန်မာ ယူ၂၃ က နိုင်တော့ ဖုန်းမှာ ဝေါလ်ပေပါ တင်ထားလိုက်သေးး)
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကိုရင်လေးတွေ ကျောင်းသားလေးတွေ အားလပ်ချိန်မှာ ကင်းပုံ ကစားနေကြတာ၊ သူတို့ အဖွဲ့ နိုင်သွားလို့
၈၊ အောင်နိုင်သူ အပြုံး
ဒါက ပင်းတယ မှာ
၉၊ ပင်းတယ ဈေးနေ့
နံပတ် ၁၀ က ရှမ်းပြည်တွေ ဘာတွေ မှာ မဟုတ်ဘူး။
ရန်ကုန်မှာပဲ အိမ်ရှေ့လမ်းမှား)
ဒီဇင်ဘာ လကုန် ပိုင်း ကျမှ ဘယ်လို ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ မသိ
မနက် ၇နာရီ နဲ့ ၈နာရီ ကြားဆို မြူတွေ ဆိုင်းနေတာ
အဲဒီမှာမှ ပုံထဲက အဘ က ဦးစံရှား ဒီဇိုင်း နဲ့ လမ်းလျှောက်သွားတော့..း)
ဒီ ပုံ ၁၁ ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်နား လို့ ထင်သွားပါသလဲ။
ဒါ FMI အိမ်ယာ တွေရဲ့ နောက်က လမ်းမှာပါ။
လမ်းက ၂လမ်း ရှိတယ် အလယ်မှာ ပလက်ဖောင်း ကို ၆ပေ လောက်လား မသိဘူး ထားထားပေးတာ။
FMI နားက လမ်းဆိုတော့ စပြီး ဆောက်တုန်းက ရှယ် လုပ်ထားတာနဲ့တူပါတယ်။
ခုတော့ ထိန်းသိမ်းမှု မရှိ တော့ အဲ့ဒီ ၆ပေ လောက် ပလက်ဖောင်း မှာ ကျူးကျော်တဲ တွေ ဆိုင်တွေ နဲ့ အပြည့် ဖြစ်ပြီးတော့
အမှိုက်တွေ တောင်လို ပုံနေတော့တာပဲ။
တောင်ပေါ်သား says: 1 –7–9ကြိုက်တယ်ဗျ
ဂျက်စပဲရိုး says: ဘွ သရုပ်ဖော် တွေ ကြိုက်တယ်ပေါ့လေ :P
ခင်ဇော် says: တညားး က HDR ရူးးးဆိုတော့..
အမှိုက် ပုံ ကို အကြိုက်ဆုံးးးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: ဟင့် တညားရယ်
နောက်မှ HDR တွေ စု တင်ဦးမယ် ငိငိငိ
Ma Ma says: ၂၊ ဂ၊ ၁၁ ကြိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: ၁၁၊ အမှိုက်ပုံတန်း ကို ဘယ်လို များ ရိုက်ထားလဲမသိ…
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲဒီတုန်းက ရာသီဥတု ကလဲ တိမ်လေးတွေ နဲ့ နေဝင်ချိန်
အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ကောင်းကင် က အရောင်စုံဖြစ်နေတာ။
ကျန်တာကိုက ဖုန်းက snapseed app မှာ HDR, Drama, tune တွေနဲ့ ကလိထားတယ်း)
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says:2နဲ့5ကိုကြိုက်တယ်
Mike says: .နံပါတ်၂ ပုံက ခီများဖွဘုတ်ကပုံပဲ..ကြိုက်တယ်..သဘာဝကျတယ်
အောင် မိုးသူ says: အမှိုက်ပုံကို HDR နဲ့ရိုက်ထားတာ မိုက်တယ်ဗျို့…….
ဂျက်စပဲရိုး says: အူးပေါက်၊ အူးမိုက်
နံပတ် ၂ ပုံက ကလေးက သူ့ကို ကင်မရာ ကြီး နဲ့ ချိန်နေတာ မြင်တော့ ဒီလူကြီး ဘာလုပ်နေပါလိမ့် ဆိုတဲ့ ပုံနဲ့
တကယ့် မိုက်ကြည့်လေးး)
အဲ့ဒီ HDR ကတော့ အတော် လက်ဆော့လို့ ကောင်းသော feature ပါပဲဗျားးးးး)
lu lu says: အောင်ပန်း နားကဆိုတော့
ဂျက်စပဲရိုး says: ဟုတ်တယ် ဗျ
နာမည် ကို ပြန် သတိရသွားပြီ
မြစပဲရိုး says: နံပါတ်(၁) ကို ကြည့်ပြီး လက်တွန်းလှည်း လေး ပေးလိုက်ချင်စိတ်ပေါ်သွားတယ်။
ဒီလို အထုပ်ကြီးထမ်းထားတာ ပုဆိုးထက် ဘောင်းဘီက ပိုသင့်တော်မှာမို့ ဘောင်းဘီလဲ ပေးချင်တယ်။
သို့ပေမဲ့ အနောက်တိုင်းဓလေ့တွေ သွင်းလာတယ် ဆိုပြီး မျိုးဖျက်ဥပဒေ ကိုလဲ ကြောက်ကြောက်။
တောတွင်းပျော် says: စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက် (နာမည်မေ့ နေတယ်)ပြောဖူးတယ်။
ရှေးကမြန်မာတွေ ပုဆိုးမဝတ်ခင်က ဘောင်းဘီ( ရှမ်းဘောင်းဘီလိုမျိုး)
ဝတ်ခဲ့ ကြတယ်တဲ့ ။ ရှေးမြန်မာတွေ ဘောင်းဘီဝတ်နေကြတဲ့ခေတ်ပြိုင်လောက်က အနောက်ဥရောပသားတွေဟာ စကတ်လိုမျိုး အထည်ကို ဝတ်နေကြသတဲ့ ။
အဲဒီစာရေးဆရာကြီး ဗီယက်နမ်သွားတုန်းက ဟိုက ကောက်စိုက်သမတွေ ဘောင်းဘီဝတ်အလုပ် လုပ်နေတာမြင်တွေ့ တာကနေ မြန်မာတွေလည်း ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်သင့် ကြောင်းပြောခဲ့ တာ။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဘောင်းဘီ ပေးချင် အနော့် ကို ပေးပါလားဟင်..
Levi’s လေး ဘာလေး :P
ဘယ်မျိုးမျက်ဥပဒေ မှ မထိစေရဘူးး)
kai says: တလောက.. မြန်မာပြည်ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့သွားတဲ့.. ဂငယ်တယောက်ကတော့… ပုဆိုးဆို.. ညစ်ပတ်ပေါက်ပြဲရင်လှည့်ဝတ်လုိ့ရတယ်ပြောပြီး… ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုမလုပ်သင့်တဲ့တိုင်းပြည်လို့မှတ်ချက်ချ. ပြန်သွားသဗျ..။
တောတွင်းပျော် says: တကယ်စွမ်း ကင်မရာမင်းကြောင့်အမှိုက်ပုံတန်းတောင်မှ
အပုတ်နံ့ တွေပျယ်ပြီး အမွှေးနံ့ တွေများထွက်လာသလားပဲ။
တကယ်လှတဲ့ပန်းချီ ဓါတ်ပုံ
ဂျက်စပဲရိုး says: ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ် ခညား)